Koreji Yekutsva Mupepa mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva kune yakanakisa Koreji Yekutsvagisa Pepa mu ||ikipedia yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Kana iwe uchida kutora 100% mapepa epakutanga emitengo isingadhuri, zvino vimba nesu. Inguva yekusimudzira kubudirira kwako mune zvedzidzo neyekutsvagisa mapepa ekunyora sevhisi mukati Zimbabwe
Maitiro Ekusarudza Yakanakisa Koreji Yekutsvaga Pepa Munyori
Kana iwe usiri kuziva kuti rondedzero yakaitwa nemapepa ekutsvagisa ekoreji, saka ndine chokwadi kuti iwe unofanirwa kuchinzwisisa izvozvi. Pepa rekutsvaga rinowanzo kupihwa pamisoro dzakasiyana siyana. Iyi ndiyo kosi inozivikanwa kwazvo yekutora kune vadzidzi vanoda kuita chakakomba kudzidza. Kunyora bepa rakadai kunoda kuti munhu ave nerudzi rwakakodzera ruzivo.
Kune vazhinji vanopa masevhisi ayo anopa koreji mapepa ekutsvagisa. Kana iwe uri mupfupi nenguva, iwe ungazviona zvakaoma kusarudza akanakisa ekutsvagisa mapepa mapepa munyori. Asi usazvidya moyo kwete, nekuti isu tichakurukura mamwe matipi ayo achakubatsira iwe mukusarudza yakakodzera.
Chinhu chakakosha icho chaunofanirwa kufunga uchisarudza mupi webasa kugona kwayo. Iwe unogona kuhaya yakanakisa koreji yekutsvagisa mapepa mapepa ane mashoma nguva kumanikidza. Ndokusaka, kurudzira kuti iwe uende kunoshandira iyo inopa nekukurumidza kuendesa kwebasa rako. Izvi zvinobatsira kwazvo mukuona kuti basa richaitwa mukati menguva yakatarwa. Uye zvakare, ita shuwa kuti pepa rekunyora basa raunosarudza rine hunyanzvi uye rakavimbika.
Iwe unofanirwa zvakare kutarisa mukuvimbika uye nemazvo kwemubatsiri webasa wawakasarudza. Chikonzero cheizvi ndechekuti mhando yemapepa aunogamuchira kubva kwavari zvinoenderana nekuvimbika kwavo uye nemazvo. Saka nekudaro, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti dzakavimbika zvakakwana kuti basa rako riitwe nekukurumidza uye nemazvo.
Chinhu chinotevera chaunofanira kutarisa mariri kuvimbika kwemupi webasa. Bvunza shamwari dzako, hama, vaunoshanda navo, kana vamwe vako nezvechinhu ichi. Izvo zvinokurudzirwawo kutarisa chiyero cheakadai mupi webasa pane akasiyana nzvimbo dzekuongorora. Kune akawanda mawebhusaiti uko iwe kwaunogona kuverenga wongororo yevakadai vanopa sevhisi kuitira kuti iwe ugone kuzokwanisa kuwana rumwe ruzivo nezve kuvimbika kwavo.
Chinhu chekupedzisira chaunoda kufunga nezvacho ndiwo mutengo unobhadharwa nemumwe mupi webasa. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kune mamwe marudzi emapepa ekutsvagurudza anoda mutengo wakakwira nepo mamwe marudzi emapepa asina mutengo wakakura unobatana nawo.
Iwe unogona kuwana vakadaro vanopa sevhisi nyore kuburikidza neinternet. Zvese zvaunoda kuti uite kutsvaga mubatsiri webasa rakakodzera kuburikidza nemajini akasiyana ekutsvaga.
Zvese izvi zvinhu ndizvo zvinhu zvaunoda kuti urambe uchifunga paunenge uchisarudza koreji yekutsvagisa mapepa munyori. Kana iwe ukatevera aya matanho, ndine chokwadi kuti iwe unozogona kunyora yakanaka koreji yekutsvagisa mapepa pasina zvakanyanya kuoma.
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kutarisa webhusaiti yeakadai mupi webasa. Nenzira iyi, iwe waizokwanisa kuverenga runyorwa rwemabasa avanopa. Nenzira iyi, iwe unozogona kuwana zano rerudzi rwepepa kunyora sevhisi yavanopa.
Nhanho yechipiri yaunofanirwa kuita kutarisa zvipupuriro zvakagashirwa nevanopa sevhisi. Nenzira iyi, iwe waizokwanisa kuziva kana kwavo kuongororwa kwakavimbika zvakakwana.
Chechitatu, iwe unofanirwa zvakare kutsvaga mhando yechiitiko icho akadaro mupi webasa. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti chave chiri mune iri bhizinesi kwenguva yakati rebei.
Chechina, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti mitengo yavo inokwikwidza zvakakwana. yeprojekti yako.
Chechishanu, iwe unofanirwa zvakare kutarisa kuti vanopa rubatsiro here kumudzidzi ari kutsvaga iro bepa. Iwe unofanirwa kuona kana vaine chero mhando yerutsigiro michina.
Tsvaga kunyora pepa
Nyora pepa rangu rekutsvaga
Nyora bepa rangu rekutsvaga
Tsvagiridzo pepa rubatsiro
Tsvagurudzo bepa riri kutengeswa
Bhadhara pepa rekutsvagisa
Tsika yekutsvagisa bepa
Koreji yekutsvaga bepa
Tenga bepa rekutsvagisa
Dzidzo yekutsvaga bepa
© Copyright 2020 ResearchTogetherzimbabwe.online. All right reserved.
Kuita kuti saiti iyi ive nyore kwauri ResearchTogetherzimbabwe.online inoshandisa makuki. Verenga yedu mutemo wecookie.